Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye iyo sida ay saakay tahay - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye iyo sida ay saakay tahay
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xaaladda degmadaasi ay haatan tahay mid aad u degan, kadib dagaal muddo saacado ah socday oo xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmadaasi.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa habeenkii xalay muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta qeyb ka mid ah degmada Afgooye, kadib markii ay weerar gaadmo ah halkaasi kusoo qaadeen.
Mas’uul ka tirsan maamulka degmada Afgooye oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in gebi ahaan degmadaasi laga saaray dagaalyahanadii Al-shabaab ee xalay weerarka kusoo qaaday.
Mas’uulkaasi ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalkii xalay lagu dilay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Daahir Digoote, isagoona sidoo kale tilmaamay in meydka 5 ka mid ah dagaalyahanada Al-shabaab ay weli yaalaan goobtii ay Shabaabka weerarka kusoo qaadeen.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkii xalay ee degmada Afgooye ayaa noqonayaa kii labaad oo ay dagaalyahanada Al-shabaab sanadkaan gudihiisa kusoo qaadaan degmadaasi, islamarkaana ay muddo saacado ah la wareegaan qeybo ka mid ah degmadaasi.